Anokosha Yakavanzwa In Europe And How To Get There By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > Anokosha Yakavanzwa In Europe And How To Get There By Train
vashanyi All nezvezvandisina kushanyira yakavanzwa dzinokosha muEurope uyewo metropolises akakurumbira European. A Photo vavo vachifara ndakamira pedyo neEiffel Tower, YeColosseum kana Big Ben zvinoita munhu wose anzwe asina (uye isu tiwane zvachose kuti!). Ungave uri Instagram muropa kana "wechokwadi" mufambi, kuenda kunzvimbo dzakapoteredza nyika zvose!
achidzungaira, famba asingazivikanwi, kuedza kusangana tsika itsva, uye ruzivo chinhu chakasiyana akanaka. Ndicho chikonzero vafambi hazvibudi afraid kuti vasataure gwara. Vanoda kumisa kubudikidza maguta kazhinji havana dzendege uye regai kuswedera vashanyi vakawanda. zvakavigwa izvi zvinokosha mu Europe anogona chaizvo kazhinji kupa mufananidzo nani imwe nyika yokuEurope pane zvimwe, mumwe kunzwisisa rudzi wechokwadi. Tichivashanyira nechitima zvichida nzira yakanakisisa vanakidzwe itsva nharaunda uye anofamba upenyu. Kana uri parwendo, Pamazita ichi ndechenyu.
Heano yedu kufarira yakavanzwa dzinokosha muEurope nyore tichironga nechitima kuti zviri pasina mubvunzo unokosha kuona.
CHERECHEDZA: Kana iwe uri kufunga nezvazvo kuenda nebhazi maringe kuenda nechitima – kusarudza vanofanira nguva dzose kuva nechitima.
No vanofanira Project pakarepo nepfungwa pachako kuna Dresde, kwazvo. Dresde ndizvo guta guru Saxony, asi pane dzimwe nzvimbo iyi rokumabvazuva munharaunda German ukoshi nezvenyu, wo. Just kunze kuDresden ndiye Konigstein Fortress. Uye kana iwe vanonakidzwa kufamba, haufaniri kurasikirwa stonework mabhiriji iri Saxony National Park. Uyezve, unofanira kuva vakatendeseka pachako. Zvakaoma shanyira Germany uye, kanenge kamwe, vasina zvakawanda beers mune dzimwe mbariro. Luckily, Saxony ane taundi Spa duku rainzi Bad Schandau, wakakwana nokuti detoxing pashure usiku akadhakwa. Gluhwein zvinofanira kuva pamusoro zvaunonyora zvachiri kumusha mukuru Christmas pamusika muGermany. The German chitima Network zviri kwazvo munharaunda iyi saka uchawana kuwana kuti ayo wakazara.
MuFrankfurt kuna Dresde Zvitima
Dortmund kuna Dresde Zvitima
Luxembourg kuna Dresde Zvitima
Amsterdam kuna Dresde Zvitima
2. Luxembourg City, munhu tiny, Romantic Capital
Chokutanga iwe kufunga kana kutaura Luxembourg ndiye mabhanga. Nyika Zvinozivikanwa chaizvo nokuda kwavo. Asi Luxembourg raMwari steepled machechi, ibwe dzimba, uye migero midiki inoita kuti kuishanyira kunakidze kupfuura zvaungatarisira. Ndokusaka nzvimbo iyi ndeimwe zvisingawanzoitiki anokosha mu Europe yakavanda pakati kondinendi iri misoro. Chinhu nzvimbo yakanaka, vakaisa panguva apo Petrusse uye Alzette nzizi kusangana. Unogona kushanyira dzimwe mumaresitorendi uye hudyu nembariro pedyo nechepakati inoungana. Mukuwedzera, meme Philippe II ane boka muzvitoro, saka imi nani kuva vakagadzirira tipedze nembiri shoma! pamwepo Rukuzemubhogu inzvimbo wakakwana nokuda da vhiki.
KuCologne Luxembourg Zvitima
Koblenz kuna Luxembourg Zvitima
3. Antwerp: Diamonds, Bikes uye More Beer
Dzokorora, kwete chaizvoizvo akavanzika chiwanikwa, asi taifanira kutaura nayo. Chikonzero chacho chiri pachena. Antwerp inzvimbo huru kumisa nepamugwagwa dzenyu chitima rwendo kubva Luxembourg kuNetherlands. kunze, guta rino anezvakawanda kupa, uye unofanira unakirwe ikoko. Kana uri vaneshungu pamusoro kuchovha uye mavakirwo unofanira kutora "mapurani rwokuparidza." Nemhaka iyi inotonhorera mepu, unogona wanikidza guta pfungwa huru uri kufarira muchimiro chokufambisa. Uye kana uchida chinhu "shinier", enda tarisa Antwerp Musha Diamonds. Panguva imwe, Belgium kukuru vanoda doro. Kunopiwa uri mumwe, anobatirira nekomichiyakazara pa "De Konick", Antwerp guta bhurure.
4. Camogli, Yechokwadi Yakavanzwa Anokosha mu Europe
chete 45 maminitsi nechitima tasva kubva kuGenoa, ichi vehove taundi duku haana yakawanda kunofanira-Anoona. zvisinei, kufanana avo munhuderrated nzvimbo vanodzorera kuti ichokwadi hunokosha Europe zvakavanzika, uyu zvakare kuva pane zvaunonyora. With kwayo mavara dzimba Nokutonga migwagwa, Camogli inzvimbo hwakakwana famba refu. Kufamba kuburikidza Camogli, Waona chinoshamisira Hotels, zvivako akare, uye zviduku Mabheka. Usati kuzviziva – iwe uchawira mune rudo panzvimbo ino! Uye kana iwe kuneta famba, hapana chinhu chiri nani pane kuva zvokudya zvemasikati dzimwe reguta mumaresitorendi. A nguva yakakwana kushanyira Camogli aizova May, panguva hove mutambo. The chikuru Kukwezva chiitiko ichi ndicho 28-tani pani. Rinoshandiswa, iwe wafungidzira zvakanaka, pakubika hove.
Florence kuna Camogli Zvitima
KuGenoa kuti Camogli Zvitima
Rome kuna Camogli Zvitima
Milan kuna Camogli Zvitima
5. Shona, a Beach Town in England close our list of Hidden Gems In Europe
Zvakaoma kuonekwa imwe yakavanzika anokosha mu Europe kana uine dainoso zvisaririra pedyo nemi. Yup, iwe kuriverenga zvakanaka. Dinosaur zvisaririra anogona kuwanikwa achitevedza Jurassic kwemhenderekedzo Shona. asi, kwete vanhu vazhinji vanosarudza kutora 3-awa chitima tasva kubva London kuvaona. Vaya vanoita vanogona zvakasiyana watersports uye vane hove uye chip pamhenderekedzo. Kana vasarudze kudya dzimwe gastropubs. Sezvo paundi iri zvishoma pasi panguva, ndiyo nguva yakakodzera kuti rwendo kuEngland. Uye yakakodzera nguva yekushanyira Weymouth ichave Nyamavhuvhu panguva yeWeymouth haradhi.
Did we help with deciding which place to visit next on your upcoming adventures? Kugona! Idzi nzvimbo shanu dzinongova muenzaniso sei kuchine vamwe vanzika uye matombo anokosha akavanzwa mu Europe. Nyika izere isingatarisirwi kumirira kuti kuziva. Kuenda nechitima kuchakupa mukana kuona nzvimbo iyi nemamwe maonero. wo, uchanakidzwa rwendo yenyu zvakawanda. Kana uchida batsira kuronga rwendo yako, kana uchida kutenga matikiti, ndapota kutishanyira panguva SaveATrain.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#Camogli #hiddemgems #Saxony #weymouth antwerp europetrains europetravel Rukuzemubhogu chitima kufamba Mazano
Rovedza Kufamba Belgium, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Travel Europe